Qorshaha Guud ee Jidka SR 167 – Waa maxay qorshaha Guud? | WSDOT
Qorshaha Guud ee Jidka SR 167 – Waa maxay qorshaha Guud?
homeConstruction & planningOnline open housesQorshaha Guud ee Jidka SR 167Waa maxay qorshaha Guud?
Waa maxay Qorshaha Guud (Master Plan) ee Jidka SR 167, Qorshaynta iyo Daarasaynta Xiriirada Deegaanka?
Deegaanka Puget Sound waa mid sii barwaaqoobaayo soona jiidanaya dad badan iyo kobaca shaqooyinka. Kobacani waxa uu kordhiyaa culayska saaran kaabayaasha gaadiidka iyo adeega, taas oo sababtay ciriiriga taraafikada oo sii kordha iyo baahiyaha dayactirka iyo ilaalinta oo saaiday. Waxaa jirta baahi loo qabo in gudbinta dadka iyo badeecadaha iyadoo la siinayo nidaam gaadiid oo kala duwan oo shaqeeya hadda iyo mustaqbalkaba.
Iyadoo qayb ka ah dadaalka Qorshaha Guud ee Jidka SR 167, WSDOT waxay falanqeyn doontaa aagga daraasadda, waxay ka shaqayn doontaa fahamka qorshayaasha aagga daraasadda waxayna dhegaysan doontaa bulshooyinka iyo hawl wadaagayaasha si loo ogaado baahiyaha gaadiidka kala duwan, hababka, iyo xalalka jidka SR 167. Hawl wadaagayaasha Qorshaha Guud ee Jidka SR 167 waxaa ka mid dowladaha qabaailada degmooyinka, magaalooyinka, dekedaha, ganacsiyada, ururada qorsheynta gobolka, iyo hay’adaha gaadiidka dadweynaha (King County Metro, Pierce Transit, iyo Sound Transit).
Khariiradan waxay tusinaysaa Qorshaha Guud ee Jidka SR 167 aagga Daraasadda.
Qorshaha Guud (Master Plan) wuxuu tixgelinayaa isticmaalka mustaqbalka ee dhulka, kobaca dadweynaha, iyo shaqada. Qorshaha Guud (Master Plan) ee Jidka SR 167 wuu hay’ado badan yahay wuuna qaabab badan yahay. Wuu hay’ado badan yahay macneheedu waa hay’adaha gaadiidka dadweynaha, magaalooyinka, iyo degmooyinka ayaa wadaagay masuuliyadda fulinta xalalka gaadiidka. Qaababka badan waxay tixgalinaysaa dhammaan xulashooyinka ay dadka iyo alaabtu isticmaalaan si ay u safraan, oo ay ka mid yihiin wadista gawaarida, lugeynta, baaskiilka, ama qaadashada gaadiidka dadweynaha. Baabuurta xamuulka qaada, baabuurta dhex dheexaadka ee loo yaqaano Vans, tareenada, iyo baaskiilada waa tusaalooyinka hababka gaadiidka. Qorshaha guud ee Jidka SR 167 waxa uu keenayaa qorsheyaal maalgashi oo la jaan qaadaya – kuwani waa mashruucyo si deg deg ah loo samayn karo oo faa’iidooyin deg deg ah leh iyo sidoo kale aan raqiis ahayn, adagtahay in la dhiso, kaabayaashaas oo qaadan doona waqti dheer in la dhiso.
Waa Maxay Qorshaynta iyo Daraasaynta Xiriirada Deegaanka?
Qorshaynta iyo Xiriirada Deegaanka (PEL) waxay caawisaa dadka go’aanka ka gaara gaadiidka inay tixgeliyaan deegaanka, bulshada, iyo saamaynta kale ee deegaanka xili hore marka la go’aaminaayo hababka qorshaynta. Macluumaadka, falanqaynta, iyo adeegyada la sameeyay inta lagu jiro qorshaynta ayaa hagi doona habka dib u eegista deegaanka.